डा. गोविन्द केसी रिहा – Bihani Online
प्रधानन्यायाधीश पराजुली नै छानबिनको घेरामा
२७ पुस २०७४ ००:२३ January 12, 2018 bihani
काठमाडौं, पुस २६-
अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा गत सोमबार पक्राउ परेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि डा. केसीलाई सामान्य तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिइएको हो ।
यस्तै, सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरु झिकाउन पनि आदेश दिएको छ ।पराजुलीका दुईओटा नागरिकता रहेको सम्बन्धमा उनले नागरिकता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शैक्षिक योग्यताको सम्बन्धमा न्याय परिषदबाट कागजात झिकाउने आदेश दिइएको हो ।
त्यसैगरी, डा. शशी शर्मालाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनमा पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको पनि अध्ययन गर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
साधारण तारेखमा रिहा गर्ने सर्वोच्चको आदेशपछि डा. केसीले आफूले न्यायालयको अवहेलना नगरेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशलाई सकारात्मकरुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी डा. गोविन्द केसीविरुद्ध परेको मुद्दाकाक्रममा भएको यो आदेशले अवहेलना मुद्दा नयाँ मोडमा पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक योग्यता र नागरिकता नै छानबिनको दायरमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पदमा रहेर दैनिक कार्यसन्चालन गर्न नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
यसअघि, बुधबार इजलासमा निवेदकको तर्फबाट बहस गरिएको थियो । त्यसलगत्तै डा. केसी पक्षको बहस सुरु भएको थियो । सुरुमा आफैं इजलासमा उपस्थित भएर डा. केसीले आफू ‘कसैको रैती नभइ सार्वभौम नागरिक’ भएको बताएका थिए ।
उनले ‘न्यायालय र न्यायाधीशको सम्मान गर्ने तर न्याय बेच्ने जोसुकैविरुद्ध लड्ने र त्यसका लागि जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार’ रहेको बताएका थिए ।
केसीको पक्षमा ९२ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्रीहरि अर्याल, एकराज भण्डारी दिनेश त्रिपाठी, मेजर थापा, गोपाल शिवाकोटी, समीक्षा थापा, लेखनाथ भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए ।
बहसमा सहभागी हुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले आफूले ‘पहिल्यैदेखि अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्दै आएको र सोही कुरा नेपाल बारले पनि उठाएको’ भन्दै डा. केसीले त्यही विषय उठाउनु जायज भएको तर्क गरे ।
अन्य अदालतहरुमा भएको भ्रष्टाचारको पनि जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने भन्दै उनले ‘केसीलाई तत्काल रिहा गरी उनले उठाएका विषयमा पूर्ण इजलासमा छलफल हुनुपर्छ’–भने ।
त्यसअघि, निवेदको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, श्याम खरेल, माधव बस्नेत, कुमार रेग्मी, शोभा कार्कीलगायतले बहस गरेका थिए ।साभार ईमेज खबरबाट
जाजरकोटमा बस दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु, ४१ जना घाईते
फाँटामा भैलो कार्यक्रम समापन ७५प्रतिशत रकम सामाजिक कार्यमा
युभेन्टसको प्रशिक्षकमा आन्द्रे पिर्लो नियुक्त
खोटाङ्गकी किराती चेली सुशिला राई मिस राई २०१८ को भोटिङ राउन्डमा प्रबेश